Nova 40 Series 5-Watt Fiampangana haingana Teknolojia Nohamafisina | Androidsis
Mbola ny Nova 5 vaovao ireo. Amin'ity indray mitoraka ity, Huawei dia nanamafy fa ho avy izy ireo amin'ny alàlan'ny famandrihana haingana 40 watt. Izany dia natao tamin'ny alàlan'ny afisy, izay tsy mamela antsika hisalasala momba an'ity vaovao ity. Ka data ofisialy iray hafa tokony ho raisina.
Mandritra ny roa andro dia hanomboka ity andiany ity. Noho izany, hianarantsika bebe kokoa momba ny toetra sy ny mombamomba ireo fitaovana izay hilalao amin'ny hetsika fanombohana tsy ho ela. Zahao eto ambany ny afisy nambara!
Tamin'ny fotoana farany momba ny mety ho mpitatitra ny Kirin 810 vaovao, ny orinasa dia nanamafy ny fisehoan-javatra resabe hafa, izay misy ifandraisany amin'ny famahana ny fakantsary anoloana. Araka izany, nanambara izany dia hampiana sensor sensor 32 megapixel ho an'ny selfie. Anisan'izany ity fampahalalana ity, efa manana angon-drakitra manokana roa momba ireo terminal manaraka ireo haseho izahay.
Afisy ofisialy Huawei Nova 5 manamafy ny fanohanany ny famandrihana haingana 40 W
Ny fahaizan'ny batterie an'ny Nova 5 dia zavatra mbola tsy fantatsika. Na izany aza, ny tatitra vao haingana dia nilaza fa amin'ny maodely rehetra amin'ity fianakaviana ity dia tsy hianjera ambanin'ny 4,000 Mah, ary azo itokisana. Ny zava-misy izay ampiharin'ny mpanamboatra haitao haingam-pandeha toy izany dia milaza amintsika fa hanome fahaleovan-tena lehibe ireo fitaovana ireo, ary tsy azo atao izany amin'ny bateria kely manana fahaiza-mAh ambany.
Natao tamin'ny alàlan'ny Weibo ny famoahana. Tao koa ny orinasa sinoa dia nanambara izany 40W haitao haingam-pandeha haingam-pandeha dia afaka mameno tanteraka ny Nova 5 ao anatin'ny 50-60 minitra. Raha tsy misy fisalasalana, azontsika atao ny manadino ny mamela ilay maodely hiasa mandritra ny roa na telo ora, satria tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny ankamaroan'ny fitaovana izay eny an-tsena amin'izao fotoana izao izay tsy manana fanohanana amin'ny famandrihana haingana na inona na inona karazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nova 40 Series 5-Watt Fast Charge Technology Voamarina
Ny Galaxy Fold dia efa vonona ny hanomboka